GoDaddy: Leahapụ ara na-akpata ma na-agba ịnyịnya ibu | Martech Zone
GoDaddy: vinghapụ ara na azụ na ịkpụ ịnyịnya ibu
Akpọrọ m asị GoDaddy. Emere m n'ezie. Enweghị m ike ikwenye na ika nwere ike imefu nde dollar na-egbu maramara cleavage ma gaa n'ihu na-ewulite nnukwu azụmahịa. Ọ bụ ụra n'ihu ndị na-ere ahịa bụ ndị rụsiri ọrụ ike iji mee ka ụdị ha dị mkpa, nke nghọta, ọkachamara na enyemaka nye ndị na-ege ha ntị. Ọ bụ ụzọ dị mfe out na o yiri ka ọ na-arụ ọrụ. Agwara m ndị ahịa m niile ka ha jiri ọrụ ndị ọzọ wee pụọ.
Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọtụtụ ndị ahịa anyị ndị iji GoDaddy. Ọ bụghị naanị na ha na-eji ọrụ ahụ, mana ha na-agwakwa m lee ka nnukwu ọrụ ndị ahịa si dị ukwuu site na ụlọ ọrụ ahụ bụ n'ezie. Ya mere n'otu akụkụ bụ ụlọ ọrụ na-elekọta ndị ahịa ya na ọrụ ọ na-enye… na nke ọzọ bụ ụdị mgbasa ozi na mgbasa ozi nke na-eto eto na isi efu.
Ma ebili mmiri na-atụgharị. Enyi Christopher Carfi (onye sonyeere ndị otu GoDaddy) kpọtụrụ m na Onye isi nchịkwa ndị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze, Susie Penner na m mechara nwee mkparịta ụka dị egwu na Chief Communications Officer, Karen Tillman. Nke ahụ ziri ezi… a Susie na a Karen na-eduga nkwukọrịta ọhụrụ! Karen abụghị naanị nwanyị nọ n'ọchịchị ndị okenye. Blake Irving, onye isi ọhụụ GoDaddy họpụtara na mbubreyo 2012 na-eme ọtụtụ mgbanwe na ụlọ ọrụ na-eme ka ụdị a… GoDaddy na-akwadebe maka IPO ha.
Mgbasa ozi GoDaddy na-agbanwekwa! Ha wepụtara mgbasa ozi SuperBowl a nke na-enye ndị mmadụ ụdị na ozi dị iche iche, GoDaddy na-enyere ndị mmadụ aka ịtụgharị nrọ ha ka ọ bụrụ azụmahịa.
Site na ọrụ dị ịtụnanya - sitere na ngalaba, Bochum, Bochum WordPress jisiri ike, asambodo SSL, nnabata Microsoft Office 365, idebe akwụkwọ n'ịntanetị, Onye nrụpụta Weebụsaịtị, Ecommerce na mmemme ọchụchọ mpaghara… GoDaddy nwere ngwa ọrụ kachasị ọnụ maka obere azụmaahịa dị. Dakọtara na nnukwu ọrụ ha na enwere m obi ike na ha na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụ ezie na Ogba dị n'azụ ha, nke ahụ apụtaghị na GoDaddy ejirila nwayọọ! Lelee Ihe GoDaddy nke Kick Ass:
Ekele, GoDaddy! Echere m na ị na-agba ịnyịnya ibu.
Tags: Blake Irvingchio godaddyChristopher carfigodaddyonyinye ihu ọha mbụipoKaren Tillmanonye susie pennerIhe GoDaddy nke Kick Ass
#Atomicchat: Ọdịnaya Emepụtara Onye Ọrụ
Nnukwu Accelerator: Dezie Ahịa na Ahịa Akụrụngwa